Social Web Suite: Sehatra fitantanana haino aman-jery sosialy namboarina ho an'ny mpanonta WordPress | Martech Zone
Raha mamoaka ny orinasanao ary tsy mampiasa haino aman-jery sosialy amin'ny fomba mandaitra mba hampiroboroboana ny atiny, dia tena tsy ampy amin'ny fivezivezena ianao. Ary… ho an'ny valiny tsara kokoa, ny lahatsoratra tsirairay dia mety tena hampiasa fanatsarana mifototra amin'ny sehatra ampiasainao.
Amin'izao fotoana izao, misy safidy vitsivitsy fotsiny amin'ny famoahana mandeha ho azy avy amin'ny anao WordPress toerana:
Ny ankamaroan'ny sehatra famoahana haino aman-jery sosialy dia manana endrika ahafahanao mamoaka amin'ny RSS RSS.
Raha azo atao, azonao atao ny mampiasa a sehatra famahanana izay mamoaka ho azy rehefa nohavaozina koa ny sakafonao.
Manolotra koa ny orinasa WordPress Jetpack izay manana safidy Publicize hanosika ny hafatrao hiditra amin'ny fantsom-piarahamoninao.
Amin'ny lafiny tsirairay, ampianao ny kaontinao amin'ny media sosialy ary rehefa nohavaozina ny sakafonao dia voaangona ny hafatra ary navoaka ny fantsona mety. Miasa tsara izy ireo, saingy misy fetrany be daholo.
Aiza a lohateny azo hamarinina amin'ny fikarohana, a lahatsoratra media sosialy mety te-ho hitaona kokoa sy hampiasa tenifototra mba hisarihana fifantohana fanampiny. Vokatr'izany, ny ankamaroan'ny mpanonta te-hampiasa tanteraka ny media sosialy dia mandray an-tanana ny fanavaozana ny haino aman-jery sosialy. Na dia mila minitra vitsy fanampiny aza ny fanovana sy famoahana isaky ny sehatra, ny vokatra dia mety ho tsara lavitra noho ny fanosehana ny sakafonao fotsiny.
Tina Todorovic sy Dejan Markovic dia nanangana plugin WordPress iray izay natsofoka tamin'i Buffer. Saingy rehefa nanomboka nahazo fangatahana endri-javatra maro kokoa izay tsy ananan'i Buffer izy ireo dia nanapa-kevitra ny hanangana ny sehatr'izy ireo manokana - Social Web Suite. Ny Social Web Suite dia mampiditra ny zava-drehetra ilain'ny sehatra fitantanana haino aman-jery sosialy miaraka amina fidirana henjana kokoa amin'ny WordPress. Ny sasany amin'ireo fiasa ireo dia misy:
Ny fahafaha-mampiditra lahatsoratra fotsiny, fa ny pejy, ny sokajy ary ny tag koa!
Navoaka teo amin'ny kaonty sosialy avy hatrany ny hafatrao raha vantany vao navoaka tao amin'ny WordPress izy ireo ary avy eo nifindra tany ambadiky ny sokajy misy azy mba hozaraina indray avy eo!
Automation tsotra izay manova ny sokajy na ny tag ny lahatsoratra ho lasa tenifototra ao amin'ny media sosialy.
Ny URL Fanentanana Google Analytics mandeha ho azy miaraka amina miova UTM dia voamarika ho azy.
Raha tokony hamoaka eo noho eo amin'ny media sosialy eo no ho eo ny pilao dia milahatra amin'ny fotoana mety indrindra hamoahana azy.
Ny lahatsoratra Evergreen dia azo averina havoaka indray.
Ny kalandrie famoahana feno dia manome anao fahitana mazava momba ny hoe oviana ary oviana no havoaka ny fanavaozana.
Misy fanampiana marobe amin'ireo sehatra media sosialy lehibe rehetra miaraka amin'ny Social Web Suite. Azonao atao ny mamoaka amin'ny pejy Facebook na vondrona, Instagram na kaonty fandraharahana Instagram, Twitter, profil LinkedIn na pejy. Ary, raha te-hitondra ny horonan-tsarinao Youtube na fahana RSS iray hafa ianao dia afaka manao izany koa.
Social Web Suite no fitaovana fandaharana ara-tsosialy matanjaka indrindra nampiasako hatrizay. Mampiasa fitaovana marobe aho amin'izao fotoana izao hanatanterahana izay ataon'ny Social Web Suite, ary faly be aho ny hisolo toerana ny Social Web Suite! Social Web Suite dia mpanakalo lalao ho an'ny bilaogera sy orinasa kely ary hanamora kokoa ny fandefasana lahatsoratra!
Ho an'ny sehatra fitantanana haino aman-jery sosialy feno toy izao dia tena takatry ny vidiny. Ny anao dia afaka manomboka amin'ny kaonty mpampiasa tokana izay mamoaka kaonty media sosialy 5 ary mandroso hatrany amin'ny kaonty orinasa ahafahan'ny mpampiasa 3 ary kaonty media sosialy 40.
Manomboha fitsapana 14 andro amin'ny Internet Web Suite
Fampahalalana: mpiara-miasa amiko i Social Web Suite.
Tags: FacebookFacebook groupMombamomba ny FacebookInstagrampiraofilin'ny orinasa instagramLinkedInpejy linkinprofiles profilesrss amin'ny media sosialykalandrie media sosialyfandefasana media sosialyfamoahana media sosialysehatra famoahana media sosialyfandaharam-potoana amin'ny media sosialytranokala sosialyTwitterWordPressplugin WordPressYouTube mankany amin'ny media sosialy